Burburka diyaarad laga leeyahay Ruushka oo laga helay badda madoow ee magaalada Sochi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Burburka diyaarad laga leeyahay Ruushka oo laga helay badda madoow ee magaalada Sochi
Diyaarad nooca militeriga ah oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa la waayay kadib markii ay kasoo kacday garoon ku yaala magaalada Sochi ee dalka Ruushka.
Diyaaradaan oo nooceedu ahaa TU-154 ayaa sida la sheegay saarnaa 91 qof oo isugu jira koox faneed, ciidamo iyo weriyeyaal, waxaana laga cabsi qabaa in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay dhinteen.
Wararka ugu dambeeyay ee laga helaayo arrinta diyaaradaasi ayaa sheegaya inay ku dhacday badda Madoow, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhiga dalka Ruushka, waxaana la sheegayaa in diyaaradaasi ay kusii socotay magaalada Ladiqiya ee dalka Suuriya.
Kooxda badbaadada Ruushka ayaa burburka diyaaradda ka helay Badda Madoow (Black Sea) oo ku taala xeebta magaalada Sochi ee dalka Ruushka.
“Burburka diyaarada Tu-154 ayaa laga helay meel 1.5-km u jirta xeebta Badda Madoow ee magaalada Sochi” Sidaasi waxaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaarada gaashaandhiga ee dalka Ruushka.
Dhinaca kale, kooxda caanka ah ee fanka laguna magacaabo Alexandrov Choir iyo Wariyeyaasha saarnaa diyaaradaasi ayaa lagu waday inay xuska ciida masiixiga ee Christmas-ka la qaataan ciidamada Ruushka ee jooga dalka Suuriya.
Ugu dambeyntii, afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Ruushka Igor Konashenkov oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in diyaaradda ay saarnaayeen koox riwaayad sanadka cusub u dhigi laheyd ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Suuriya.